DAAWO: Booliiska Nigeria oo laayey dad awalba cabasho ka ahaa isla naxariis darrada Booliiska + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Booliiska Nigeria oo laayey dad awalba cabasho ka ahaa isla naxariis...
(Lagos) 21 Okt 2020 – Dad badan oo ka dibad baxayey arxan darrada Booliiska Nigeria ayaa dad badan waxaa ka diley isla Booliiska dalkaasi oo dad ku laayey magaalada ugu ballaaran Lagos ee Nigeria.
Dadka ayaa ka dhiidhinaya afduub, baad iyo xoog sheegasho uga timaada booliiska gaar ahaan kuwa loo yaqaan Special Anti-Robbery Squad (SARS). iyadoo uu Barasaabka Lagos uu jidadka soo dhoobay ciidamo xoojin ah oo ah kuwa rabshadaha la tacaala isagoo soo rogey bandow 24-saacadood ah.
Dad goobjoog ah ayaa BBC u sheegay inay tiriyeen 20 mayd iyo ugu yaraan 50 qofood oo dhaawacmay kaddib markii ay booliisku rasaas la dheceen.
Hay’adda Amnesty International ayaa iyaduna sheegtay inay sheegtay dokumentiyo la isku hallayn karo oo xaqiijinaya inay dad badani dhinteen.
Dowladda ayaa ballan qaadday inay baarayso toogashada dhacday, iyadoo marka Lagos laga yimaado sidoo kale bandow la saaray gobollo kale.
Previous articleHaddii aad doonayso tusaalaha nin madax ah oo qaran dhidibada u aasay akhri sheekada Julius Nyerere kaddibna eeg Tanzania
Next articleRwanda oo keentay qorshe loo bogay oo lagu baaro cudurka Covid-19 + Sawirro